नेपाल आज | बामदेव गौतममाथि प्रचण्ड, खनाल र नेपालको षडयन्त्र ( भिडियोसहित)
बामदेव गौतममाथि प्रचण्ड, खनाल र नेपालको षडयन्त्र ( भिडियोसहित)
यतिबेला सत्तारुढ दल नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा सिधासिधा बुझिएको कुरा के हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले घेराबन्दी गरेका छन् । दाहालले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई आफनो पक्षमा पारेर ओलीमाथि दवाव सृजना गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना हुँदै गर्दा यो विषयले फरक ब्याख्या पाउन थालेको छ । घेराबन्दीमा प्रधानमन्त्री ओली नभइ उपाध्यक्ष गौतम परेका छन् ।
मुख्यतः प्रचण्ड, झलनाथ र माधव नेपालले वामदेव गौतमको मजाक उडाएका छन् । उनीहरुले गौतमलाई संविधान संशोधन गरेर भएपनि प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने हावादारी कुरा गरेर उनको राजनीतिक ओज घटाउने काम गरेका छन् ।
नेपाली जनता दलका अध्यक्ष हरिचरण साह भन्छन्, ‘ एउटा व्यक्तिका लागि कहिं संविधान संशोधन हुन्छ ? दाहाल, खनाल, नेपाल यो तीनवटा ‘ल’ भएका नेताले गौतमलाई ‘वेटलेस’ गराएका छन् । गौतमलाई अनावश्यक आश्वासन दिएर उचाल्ने र पछार्ने काम यी तीन नेताले गरिरहेका छन् । यो गौतममाथिको षडयन्त्र हो । यो कुरालाई गौतमले पनि बिस्तारै बुझ्न थालेका छन् । ’
प्रचण्डले ओलीलाई दवाव दिएर सरकार ढाल्ने वा पार्टी फुटाउने भन्ने कुरा छ, त्यो असम्भव छ । प्रचण्डले ओलीसामु आत्मसमर्पण गरेर पार्टी विलय गराएका हुन् । आफनो पार्टी चलाउन नसकेर आत्मसमर्पण गरेको मान्छेले के को पार्टी फुटाउनु ? प्रचण्डले अलग्गै पार्टी चलाउने हैसियत गुमाइसकेका छन् ।
ओलीलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पनि साथ छ । मोदीले ओलीलाई शल्यक्रियाका लागि शुभकामना दिंदा ‘डियर फ्रेण्ड’ सम्बोधन गरेर आफनो प्रेम दर्शाइसकेका छन् । उनीहरुबीच केही विवादलाई छोडेर भन्ने हो भने गाढा सम्बन्ध छ । मोदीले ओलीको शल्यक्रियाका लागि भारतको एपोलो अस्पतालबाट डाक्टरसमेत पठाइसकेका छन् ।
त्यसकारण सरकार ढल्ने र नेकपा फुट्ने भन्ने कुरा सम्भव छैन । बरु, प्रधानमन्त्री ओली शल्यक्रियापछि झन तन्दरुस्त भएर काममा फर्किनेछन् ।